नागरिक अगुवाहरुले गोविन्द केसीलाई भने–अनसन फिर्ता लिनुस् - Dainik Nepal
नागरिक अगुवाहरुले गोविन्द केसीलाई भने–अनसन फिर्ता लिनुस्
दैनिक नेपाल २०७५ माघ १८ गते १७:५३
काठमाडौँ, १८ माघ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले डा. गोविन्द केसीलाई आमरण फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले डा. केसीको कमजोर स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यान दिँदै आमरण अनसन अन्त्य गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, प्रभु बुढाथोकी, डा. दिनेश प्रसाईं र रविन्द्रसिंह बानियाँ लगायतका नागरिक अगुवाहरुले केसीलाई अनसन फिर्ता लिन लिखित आग्रह गरेका हुन् ।
‘चिकिसा क्षेत्र सुधारका लागि चलेको यहाँको अभियानको हामी उच्च मुल्यांकन गर्दछौं । सत्य र निष्ठाको यहाँले सुरु गर्नु भएको अभियानलाई नेपाली सामाज र नागरिकहरुले उच्च मूल्याकंन गरेको स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ आग्रहमा भनिएको छ, ‘यस अभियानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन यहाँका निरन्तर खबरदारी र सक्रियता जरुरी रहने हुनाले कमजोर स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गर्दै आमरण अनसनको कार्यक्रममाथि पुनर्विचार गर्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।’
विज्ञप्तिमा उनीहरुले सरकारले १५ औं अनसन समाप्त गर्न भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुको साटो संवाद र शिष्टता समेत नअपनाइने आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले डा. केसीको अनसनबाहेक अन्य संघर्षका कार्यक्रमहरुमा आफूहरुको साथ रहने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
आजै डाक्टर केसीलाई भेटेर पूर्वराष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले पनि अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । हिजो मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेबहादुर देउवाले केसीलाई भेटेर अनसन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।
केसी समर्थक नागरिक अगुवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले समेत अनसन फिर्ता लिन भनेपछि केसीमाथि अनसन फिर्ताको दबाब बढेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिसकेको छ ।
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरण : रवि लामिछानेसहित तीन जनलाई अदालत पेश गरियो
साहित्यकार दीक्षितको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्यष्टि गरिने
नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, कार्यविभाजन टुंग्याउने तयारी